Iikhosi ze-16 zeSifundo seMpilo seNgqondo eziSimahla kwi-2022
Iikhosi ezili-16 zeSifundo seMpilo seNgqondo eziSimahla kwi-Intanethi
Kweli nqaku, uya kufumana iikhosi ezininzi zasimahla ezikwi-Intanethi ezinokubhalisa kwangoko kwi-smartphone okanye kwi-laptop yakho. Uya kufunda ngempilo yengqondo kwiiyunivesithi eziphezulu, iikholeji, kunye namanye amaziko avela kwihlabathi liphela kwinduduzo yekhaya lakho.
Ukubaluleka kwempilo yengqondo yomntu akunakuba noxinzelelo ngokwaneleyo. Abantu, abasempilweni engqondweni nasemzimbeni banemveliso ephezulu, nangona kunjalo, akunakuthethwa okufanayo kubantu abangakhange benze njalo.
Ukuze uqeshwe kuwo nawuphi na umbutho intlalontle yakho iyavavanywa kwaye ithathelwe ingqalelo kwaye uyaqeshwa ukuba intlalontle yakho iyanelisa kwi-HR.
Le yenye yeemeko ezininzi apho impilo-ntle yomntu ngokubanzi ichonga ikamva labo.
Ungazibuza amatyeli aliqela ukuba "yintoni ebangela ukuba lo mntu aziphathe ngale ndlela benza ngayo?". Ngokungafaniyo nezinye izigulo onokuziqonda okanye uqikelele ngokuchanekileyo into engalunganga ngomntu ngokumjonga nje. Ayisebenzi ngale ndlela kwimpilo yengqondo, kufuneka ube neliso elahlukileyo kuyo kwaye ungayifunda.
I-Psychology yeyona ntsimi iphambili yesifundo esenza ngcono izifundo zokuziphatha komntu kunye nempilo yengqondo. Unokufumana i-bachelor's, master's, okanye ugqirha kuyo kwaye ube sisazinzulu esime kakuhle. Kodwa ngaphambi kokuba ungene kuyo, kutheni ungazivavanyi kuqala ukuze ubone ukuba ijongeka kanjani.
Thina kwiSifundo saMazwe ngaMazwe silungiselele uluhlu lweekhosi eziphezulu zasimahla ezikwi-Intanethi eziza kukunceda ekumiseleni umsebenzi ophumeleleyo kwizengqondo. Ungabhalisa kwezi zifundo ukuba unqwenela ukuba sisayikholojisti, ufuna ukufunda ngokuziphatha kwabantu, okanye usebenze kwimpilo yakho yengqondo kwaye usebenze ngakumbi emsebenzini wakho okanye kwimisebenzi yesiqhelo yemihla ngemihla.
1 Kutheni usithatha ikhosi yezempilo yengqondo kwi-Intanethi?
2 Yintoni ikhosi yempilo yengqondo?
3 Ngaba izifundo zengqondo ezikwi-Intanethi ziyasebenza?
4 Zeziphi iziqinisekiso endizifunayo ukuze ndibe ngumsebenzi wokuxhasa impilo yengqondo?
5 Iikhosi zeMpilo yeNgqondo eziSimahla kwi-Intanethi
5.1 IDiploma kwiMpilo yeNgqondo
5.2 Ukubetha Ukudakumba
5.3 Ukuxhasa abantu abakhubazeke ngokwasengqondweni kunye nokugula ngengqondo
5.4 Uncedo lokuqala lwengqondo
5.5 Ukungaqondakali kwengqondo
5.6 UbuGcisa neNzululwazi yoBudlelwane: Ukuqonda iimfuno zabantu
5.7 Impilo yengqondo kunye nesondlo
5.8 Ukulawula isifundo, uxinzelelo kunye nempilo yengqondo kwiYunivesithi
5.9 Ukuqikelela ukuSebenza nokuPhepha koPhulo
5.10 Impilo yeNgqondo yoLutsha: Ukunceda abantu abancinci ngexhala
5.11 Ukujongana noxinzelelo lwasemva kokubeleka njengoGcisa lwezeMpilo
5.12 Ukuqaqanjiswa kweengxaki zeMpilo yeNgqondo
5.13 Ukunyamekelwa kwengqondo
5.14 Ulawulo ngokubanzi lweengqondo kwi-BPD
5.15 Ukunyangwa kwengqondo okuqinisekileyo kunye neMpilo yeNgqondo
5.16 Ukunyamekela Abantwana Abasesichengeni
Kutheni usithatha ikhosi yezempilo yengqondo kwi-Intanethi?
Imfundo ekwi-Intanethi iza nezibonelelo ezininzi kodwa phakathi kwazo zonke izibonelelo zokuba bhetyebhetye, ukulungeleka, kwaye iikhosi ezikwi-Intanethi ziza ngamaxabiso aphantsi okanye simahla njengakweli cala. Oku kuthetha ukuba ungafunda isakhono, okanye ufumane isidanga sokhetho lwakho kwi-Intanethi ngaphandle kokuphazamisa imisebenzi esele ikho.
Ke ukuba usebenza kwinkampani, uqhuba ishishini, okanye ulandela isidanga kwisikolo esingaxhunyiwe kwi-intanethi. Usengabhalisa kufundo lwe-Intanethi olufana nezifundo zasimahla ezikwi-Intanethi ezempilo ezidweliswe kule post.
Yintoni ikhosi yempilo yengqondo?
Izifundo zempilo yengqondo zizifundo zengqondo ezifundisa abantu malunga nemicimbi yezempilo yengqondo, zibonelela ngezisombululo kule micimbi, kwaye ube nakho ukwenza oko ukufundileyo kwindawo yokusebenza yokwenyani.
Ngaba izifundo zengqondo ezikwi-Intanethi ziyasebenza?
Impendulo ethe ngqo koku ngu-Ewe! Iikhosi zempilo yeengqondo ezikwi-Intanethi zinikezelwa ziiyunivesithi eziphambili kunye namaziko avela kwihlabathi liphela kwaye afundiswa ngabahlohli abaphambili kunye noonjingalwazi. Iiklasi ke zisiwe kwi-intanethi kusetyenziswa amaqonga okufunda kwi-Intanethi.
Kwinto enye oyifundileyo kwizifundo zempilo yeengqondo ezikwi-Intanethi ziyinto enye ekucingelwa ukuba ayixhunyiwe kwi-intanethi, umahluko kuphela yindlela yokuhambisa. Kodwa ukuba ngumbuzo wokuba ngaba izifundo zempilo yeengqondo ezikwi-Intanethi zivumelekile na, ewe kunjalo.
Zeziphi iziqinisekiso endizifunayo ukuze ndibe ngumsebenzi wokuxhasa impilo yengqondo?
Unokufumana isidanga kwiPsychology okanye kwiMpilo kunye noKhathalelo lweNtlalo. Unokufunda ngesiqinisekiso seMpilo yeNgqondo, ukuCetyiswa, okanye iinkonzo zasekuHlaleni. IDiploma yeMpilo yeNgqondo okanye iSatifikethi IV seMpilo yeNgqondo nayo inokukunceda njengomsebenzi wokuxhasa impilo yezengqondo.
Iikhosi zasimahla ezikwi-Intanethi zempilo yengqondo ezichazwe kolu thunyelwe ziya kukunceda ekuqaliseni ikhondo lomsebenzi kwicandelo lezengqondo kwaye ngokuthe ngcembe ndikubone kuhambo lwakho njengomsebenzi wokuxhasa impilo yezengqondo.
Kuba unemincili yokuqalisa ukufunda, siza neekhosi zempilo yengqondo ezili-16 onokuzifunda ngexesha lakho ngaphandle kokuhlawula idemo.
Iikhosi zeMpilo yeNgqondo eziSimahla kwi-Intanethi
Ezi zilandelayo zifundo ezili-16 zasimahla ezikwi-Intanethi eziza kukuxhobisa ngezakhono kunye nolwazi ukuze ube yingcali kwezempilo yengqondo;
IDiploma kwiMpilo yeNgqondo
Ukuxhasa abantu abakhubazeke ngokwasengqondweni kunye nokugula ngengqondo
Uncedo lokuqala lwengqondo
UbuGcisa neNzululwazi yoBudlelwane: Ukuqonda iimfuno zabantu
Impilo yengqondo kunye nesondlo
Ukulawula isifundo, uxinzelelo kunye nempilo yengqondo kwiYunivesithi
Ukuqikelela ukuSebenza nokuPhepha koPhulo
Impilo yeNgqondo yoLutsha: Ukunceda abantu abancinci ngexhala
Ukujongana noxinzelelo lwasemva kokubeleka njengoGcisa lwezeMpilo
Ukuqaqanjiswa kweengxaki zeMpilo yeNgqondo
Ulawulo ngokubanzi lweengqondo kwi-BPD
Ukunyamekela Abantwana Abasesichengeni
A idiploma kwimpilo yengqondo Ngaba ungakunika umsebenzi wokuba ngumsebenzi wokuxhasa impilo yengqondo kuwo nawuphi na umbutho, kwaye ngeli xesha ulifunda kwi-intanethi simahla. Enkosi kwi-intanethi kunye no-Alison-iqonga lokufunda elikwi-Intanethi-onika le khosi unokufumana izakhono ezifanelekileyo zokucombulula imiba yezempilo yengqondo ngaphandle kwexesha.
Ngokubhalisa kule khosi uya kufumana ukuqonda okungcono kwazo zonke iintlobo zezifo zengqondo, ukubona iimpawu, kunye nokuhambisa unyango kubantu abachaphazelekayo. Uya kufunda ukuba uyilawula njani intlalontle yakho kunye neyabantu abakungqongileyo.
Le yenye yeekhosi zasimahla ezikwi-Intanethi zempilo yengqondo ezinikezelwa nguAlison kwaye yabelana nabafundi ngemfihlo zokubetha ukudakumba. Ungayisebenzisa ebomini bakho okanye / nakwabanye abalwa nokudakumba kwaye bafuna uncedo ukuze boyise.
Uya kuxhotyiswa ngezakhono zonke ezifunekayo ekubethweni koxinzelelo oku kubandakanya ukufunda ngokwasemphefumlweni nangokwengqondo iziphumo zoxinzelelo, inzululwazi kunye nezibalo zoxinzelelo, iintsomi malunga nokudakumba, kunye nonyango lonyango loxinzelelo, njl. bhalisa apha.
Kwimfuno yakho yokuba sisayikholojisti okanye umsebenzi wezempilo yengqondo, kuya kufuneka ufunde indlela yokujongana nabantu abakhubazeke ngokwasengqondweni kunye nezifo zengqondo. Ukufezekisa oku, uya kufunda imigaqo-nkqubo emine ekhokelayo yomsebenzi wokuxhasa kunye namandla kunye nezixhobo zabathengi kunye noluntu lwabo olubandakanyekayo kwinkqubo yokhathalelo.
Le yenye yeekhosi zasimahla ezikwi-Intanethi eziza kunceda ekumiseleni kwishishini lezempilo njengengcali yezempilo yengqondo. Unga bhalisa apha.
IYunivesithi yaseJohn Hopkins ifundisa le khosi, i-Psychological First Aid, e-Coursera kwaye yenye yezi zifundo zasimahla ze-Intanethi ezenziwa yiyunivesithi. Le khosi ifundisa abafundi indlela yokubonelela ngoncedo lokuqala lwengqondo kubantu abakwimeko engxamisekileyo.
Uncedo lokuqala lwenziwa ngokusebenzisa imodeli ye-RAPID: ukumamela okubonakalisayo, ukuvavanywa kweemfuno, ukubekwa phambili, ukungenelela, kunye nokuchithwa. Inokusetyenziswa nakweyiphi na imeko yezempilo yoluntu kunye nokwakha isakhono sakho njengengcali yeengqondo. Unga bhalisa apha.
Kwixesha elidlulileyo, ukucamngca, ukucamngca, kunye nokucamngca kwakusetyenziselwa ukuphilisa ingqondo, kwaye nangona yayijongwa njengenkqubo eyimfihlakalo ngezo ntsuku. Ngoku, ibuyile kwaye imile nzulu kwicandelo lezempilo ngakumbi isayikholoji kunye neuroscience.
Iingcali zengqondo zisebenzisa ingqondo ekunyangeni ungenelelo oluninzi lonyango kunye neendlela zokukhuthaza impilo kunye nolonwabo. Unga bhalisa apha.
Le yenye yeekhosi zasimahla ezikwi-Intanethi zempilo yeengqondo ezinikezelwa yiDyunivesithi yaseToronto kwaye ihanjiswa kwi-Intanethi yi-Coursera. Uya kwaziswa ngeendlela ezahlukeneyo ezifanelekileyo kubudlelwane bemihla ngemihla kwicandelo lomsebenzi wentlalo kunye nokhathalelo lwempilo.
Ekupheleni kwale khosi, uya kufumana izakhono kwizengqondo, ukuzithemba, ukunxibelelana, kunye nokwakha ubudlelwane obuqinileyo nabantu abakungqongileyo. Unga bhalisa apha.
Isondlo sidlala indima ebalulekileyo kwimpilo yengqondo yabantu kunye nokwazi ukutya okufanelekileyo okukutya ukukhuthaza intlalo-ntle yinto ebalulekileyo ekufuneka uyifundile. Ungabhalisa kule khosi ukuba sele ulingcali kwezempilo usebenza nabantu abanemicimbi yezempilo yengqondo.
Ungabhalisa kwakhona ukuba unamaxhala, uxinzelelo, okanye imeko yokudakumba. Uya kufunda ukusebenzisa ukutya okufanelekileyo kunye nesondlo ukunceda ukulwa nale micimbi. Le khosi yenye yeekhosi zasimahla ezikwi-Intanethi ezenziwa yiYunivesithi yaseCanterbury kwaye zithunyelwa kwi-Intanethi yi-edX. Unga bhalisa apha.
Le khosi yeyabafundi baseyunivesithi, isikolo esiqhelekileyo siza nobuninzi boxinzelelo kwaye kuye kwakho iimeko ezininzi apho zichaphazela impilo yengqondo yabafundi.
Le khosi isebenza njengokunciphisa uxinzelelo, iya kukubonelela ngezakhono, ulwazi, kunye nokuqonda ukuze uqaphele, uchonge kwaye uphendule kwimiceli mngeni yempilo yengqondo kuwe nakwabanye. Ngenye yeekhosi zasimahla ezikwi-Intanethi ezenziwa yiYunivesithi yaseCretin kwaye zithunyelwa kwi-Intanethi nge-edX. Unga bhalisa apha.
Ngaba imveliso yakho yemihla ngemihla isilela ekusebenzeni kakuhle? Okanye uxinekile emsebenzini kwaye ichaphazela ukusebenza kwakho? Ke le khosi yeyakho.
Kule khosi ibonelelwe yiYunivesithi yaseMonash, uya kufunda ngeendlela ezinengqondo zokunciphisa uxinzelelo kunye nokwenza ngcono impilo yakho okanye ukusebenza emsebenzini okanye esikolweni.
Ikhosi yenye yeekhosi zasimahla ezikwi-Intanethi zempilo yeengqondo ezinikezelwa kwi-Intanethi yiKamvaLearn, kwaye unokusebenzisa ubuchule kubantu abakungqongileyo abaneengxaki ezifanayo zengqondo. Unga bhalisa apha.
Abakwishumi elivisayo bajongana noxinzelelo oluninzi ngelixa bekhula kwaye ingxaki yoxinzelelo yenye yazo, kwaye ke, bafuna uncedo. Ukuphucula izakhono zakho zokhathalelo lwempilo, bhalisa kule meko, kwaye ufunde ukuba unganceda njani ukulawula iingxaki zokukhathazeka kubantu abancinci.
Kananjalo, ukuba ungutitshala okhangela indlela yokunceda abantu abancinci boyise imiba yabo yoxinzelelo kufuneka ubhalise kule khosi.
Ngale khosi, unganakho ukubona abantwana abakwishumi elivisayo abanengxaki yokuxhalaba kwaye ubanikeze ngobuchule bokwenza ngcono. Unga bhalisa apha.
Ngelixa ukhulelweyo, abasetyhini badlula kuxinzelelo, ukuphazamiseka koxinzelelo, kunye nokutshintsha kwemozulu okuyingozi kwimpilo yabo yengqondo kwaye bafuna uncedo. Kule khosi, uya kufunda ngendlela yokubonelela ngenkxaso efanelekileyo kubazali abatsha nabalindelekileyo.
Uya kuziqonda iimpawu zoxinzelelo lwasemva kokubeleka, indlela yokuxhasa abazali abachaphazelekayo, kunye nokuphucula impilo yabo yengqondo kunye nokuba sempilweni.
Inkqubo ibonelelwa yiDyunivesithi yase-Exeter kwaye ihanjiswa kwi-Intanethi yiFutureLearn. Unga bhalisa apha.
Le khosi ibonelela ngeziqinisekiso zasimahla zokuqonda impilo yezengqondo kunye nokuqonda uluhlu lweengxaki zempilo yengqondo. E-UK, abantu abanezakhono kunye nolwazi olufunekayo kakhulu kwaye unokuqinisekisa umqeshi wakho wangoku okanye onokuba nakho ukuba unolwazi kule nkalo.
Le khosi inikezelwa kwi-Intanethi yi-StriveTraining kwaye kuthatha umndilili weeveki ezi-5 ukuya kwezi-10 ukuyigqiba. Unga bhalisa apha.
Isifo sengqondo esixhalabisayo siyakhula impilo yengqondo exhaphakileyo kubantu abadala kwaye bafanelwe kukhathalelo olufanelekileyo kwaye ababaninzi abantu abanobuchule obumiselweyo bokubakhathalela. Ungabhalisa kule khosi, uKhathalelo lwe-Dementia, ukuze ufunde imigaqo-siseko ephambili yokuxhasa nokukhathalela abo banesifo sengqondo esixhalabisayo usebenzisa indlela efanelekileyo.
Le khosi inikezelwa kwi-Intanethi nguVision2learn, 100% yasimahla, kwaye ithatha iiveki ezili-16 ukuyigqiba kwaye uya kunikwa isatifikethi ekupheleni kwekhosi. Unga bhalisa apha.
Ukuphazamiseka kuBorderline Personality Disorder (BPD) luhlobo lwesifo sengqondo esibonakaliswa kukungazinzi kwemeko, indlela yokuziphatha, kunye nobudlelwane.
Le khosi yenye yeekhosi zasimahla ezikwi-Intanethi zempilo yeengqondo ezinikezelwa kwi-Intanethi yiHarvard Medical School kwaye ibonelela ngoqeqesho kwabo bakwezempilo malunga nendlela yokuchonga nokunyanga abantu abaneBPD. Unga bhalisa apha.
Ikhosi, i-Positive Psychiatry, kunye neMpilo yeNgqondo yenye yeekhosi zasimahla ezikwi-Intanethi ezenziwa yiYunivesithi yaseSydney kwaye zibonelelwa nge-Intanethi yiCoursera.
Ikhosi iphonononga imiba eyahlukeneyo yempilo entle yengqondo kwaye inikezela ngesishwankathelo seentlobo eziphambili zokuphazamiseka kwengqondo, oonobangela, unyango, kunye nendlela yokufuna uncedo kunye nenkxaso. Unga bhalisa apha.
Ukubhalisa kule khosi kuya kukufundisa ukuba kunjani ukukhathalela abantwana abasesichengeni. Ukuba uyabathanda abantwana okanye usebenza kwindawo enabantwana abaninzi ke le khosi yeyakho.
Le khosi iphonononga imigaqo-nkqubo eyahlukeneyo yophuhliso lwabantwana kunye nokuba ngumzali okunceda ekunyamekeleni abantwana abanemicimbi yezempilo yengqondo. Unga bhalisa apha.
Oku kuzisa isiphelo kwizifundo zasimahla ezikwi-Intanethi zempilo yezengqondo, landela amakhonkco anikezelweyo ukuqala naziphi na izifundo ozikhethileyo, kwaye uqalise ukufunda kwangoko ngexesha lakho.
Baninzi abantu abaphethwe kukugula okanye olunye uhlobo, isifo sengqondo sesinye sezifo eziphambili. Kwaye uninzi lwabantu alukuqondi oku ngokukhawuleza kwaye kukhokelela esiphelweni sabo, umba wezifo zengqondo awuxinezelekanga ngokwaneleyo, awonelanga ngokwaneleyo kuwo.
Yaphula ikhonkco. Thatha enye okanye ezingaphezulu kwezi zifundo zasimahla kwi-Intanethi, funda malunga nempilo yakho yengqondo kunye nabo bakungqongileyo nokuba kusekhaya, emsebenzini, okanye esikolweni. Kwaye ngenxa yokuba ezi zifundo zifundiswa kwi-Intanethi azizukubeka uxinzelelo kubomi bakho bemihla ngemihla, ngelixa usebenza okanye esikolweni ungafunda ngaxeshanye.
Ezinye zeekhosi ezidweliswe apha zinesiqinisekiso sokugqitywa kwaye ngelixa ezinye izatifikethi zisimahla, ezinye azikho. Ukufumana isatifikethi kuya kukwenza ubonakale ngathi unobungcali ngakumbi kwaye utsala abathengi abanokubakho.
Iiyunivesithi eziphezulu ze-10 eCanada ngaphandle kwe-IELTS
IiDigri zeMasters zasimahla ezikwi-Intanethi ezineZatifikethi
Ukuphononongwa kwezifundo zasimahla kwi-Intanethi eJamani kunye neNdleko yokuPhila
Iikhosi ze-Intanethi izifundo zekhompyutha
Izifundo zasimahla ezikwi-intanethi zempilo yengqondo
Post Previous:Iinkqubo ezili-13 eziPhezulu zeGeotechnical zobunjineli
Okulandelayo Post:Iimfuno ezipheleleyo zeMasters eMelika kunye nendlela yokuzifumana
Pingback: Iikhosi eziphezulu ze-17 zasimahla ezikwi-Intanethi zeZitifiketi ze-2021